Àgwà 7 nke Social Were Were | Martech Zone
Na Mọnde, anyị kesara infographic ahụ site na Blue Focus Marketing, Branddị gị dị ka mbara ala, na-enye ihe akaebe na ihe atụ dị mfe nke na-ekwu banyere ike iji ndị ọrụ gị mee ihe iji nyere aka bulie akara ụkwụ mgbasa ozi gị. Ọ gafere ịkọgharịrị akara gị, agbanyeghị, dịka ị ga-ahụ na ozi ọhụụ ọhụrụ ha.
Dị ka anyị na-akọwa na akwụkwọ Amazon anyị kacha ere, The Social Were Were: Olee Great Companies Mee Social Media Ọrụ, enweghị ike inwehie ọ bụla na ụdị mmekọrịta nke ndị ahịa ha na ndị ọrụ ha na-agbanwe. Na bazaa dijitalụ, ezigbo olu nke onye ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịbụ akụ kachasị ike nke ika iji mepụta mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa na ndị ọzọ dị mkpa nke obodo ndị dị n'ịntanetị.
Ntinye aka ndị ọrụ, nsonye nke ọrụ ha na mgbasa ozi mgbasa ozi, ntinye aka ha na ụlọ ọrụ, ikike ha nwere ịmekọrịta, ikike ịge ntị ha, nka ndị ahịa ha na ikike ha nwere ịgbanwe mgbanwe na nzukọ bụcha njirimara nke ezigbo onye ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ugbu a, ihe ị ga - eme bụ ịga chọta ha!
Tags: acha anụnụ anụnụ na-azụ ahịa ahịaonye na-elekọta mmadụna-elekọta mmadụ ọrụ akwụkwọonye na-elekọta mmadụ
Ngwá Agha Nzuzo maka Marketingzụ ahịa na Ọrịre Ka Mma